သဒ္ဓါလှိုင်း: June 2010
ပြတင်းပေါက်က တဆင့် လွင့်စင် ဖြာကျလာတဲ့ မိုးစက် မိုးပေါက်လေးတွေကို ကြည့်နေရင်း မျက်နှာပေါ်ကို မိုးရေ တချို့ ကပ်ငြိ စွန်းပေလို့ စိုထိုင်းစ ပြုလာပါပြီကော…။ ရင်ထဲမှာလည်း မျက်ရည်မိုးတွေ တစိမ့်စိမ့် ရွာနေတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ..။
ဘယ်လောက်ကြာသွားလည်း မသိလိုက်ပေမဲ့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ တချိန်က ခုလို မိုးရွာနေတဲ့ နေရာလေး တခုကို အမှတ်မထင် ရောက်သွားတာကို အမှတ်ထင်ထင် သိလိုက်ရတယ်..။
ရေကန်ထဲကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ပစ်ပေါက်နေတဲ့ ခဲလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပစ်ပေါက်ပါစေ ဆိုပြီး ကြည့်နေတဲ့ `ကို့´ ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်.။ စိတ်ရှိတိုင်း လုပ်ခွင့်ပေးလို့ပါ…။
အို……… ကျမ စိတ်သက်သာရာရအောင် လုပ်နေတာကို ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ `ကို့´ ကို ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်.။
လောလောဆယ် ကျမကို မတားကြပါနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ပြုပါလို့ စိတ်ထဲကနေ အထပ်ထပ် တောင်းဆိုနေမိတယ်……..။ ငိုချင်ရင်လည်း အားရအောင် ငိုလိုက်ပါ……. စိတ်ကိုမထိန်းထားနဲ့တဲ့……..
တဒင်္ဂ ငြိမ်သက်သွားမိတယ်……. ထိန်းချုပ်ထားရင်းနဲ့ အလိုအလျောက် မျက်ရည်တွေ ကျလာပြီးမှ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်မိတော့တယ်..။ ကျမကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားရအောင် ငိုခွင့်ပြုပါ………။
ဟုတ်တယ်…… နက်ဖန်ဆို `ကို´က ကျမနဲ့ အဝေးဆုံး နေရာတခုကို ထွက်သွားတော့မှာပဲလေ..။ တားပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ ကျမကို ငိုခွင့်ပြုရုံ ငိုခွင့်ပြုကြပါ..။
ဝေးတယ်ဆိုတာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားရတဲ့ ခံစားမှု တရပ်အနေနဲ့ ဝေးကွာခြင်း ဒုက္ခကို ဘယ်လောက်ထိ ခံစားနေရအုံးမှာလဲ မသိပေမဲ့ သေချာတာကတော့ ကျမတို့ကို ဝေးကွာမှုဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီး တခုက ခြားနားထားလိုက်ကြပြီ…။
ဝေးကွာမှု ဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီးက ဘယ်လိုတံတိုင်းကြီးလဲ…… ကျမဖြင့် မုန်းလိုက်တာ……… ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် ကျမတို့ နှစ်ဦးကို ခွဲခွါခဲ့ရတာလဲ………
တံတိုင်းကြီးရဲ့ နောက်မှာရော ဘာတွေရှိနေလဲ… ရှိနေတဲ့ အရာတွေထဲမှာတော့ ဓနဂုဏ် အင်အားတွေ ပါနေမယ်ဆိုတာ…. !!!
တကယ်ဆို နှုတ်ဆက် လက်ပြ ထွက်ခွါသွားမှာကို မကြည့်လို မမြင်လိုလို့ `ကို´ သွားမဲ့ နေ့မှာ လိုက်မပို့တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား..။
ဟုတ်တယ်…….. ကျမဆိုတဲ့ ကျမကလည်း… လေ…
ကျမကို အရင် နှုတ်ဆက် ထွက်သွားမှာကို မလိုလားတဲ့ သူ..။ ကျမရှေ့က ထွက်ခွါသွားမှာကို မကြည့်ချင်တဲ့သူ…။ အတ္တကြီးတဲ့သူပေါ့…။ ကျမကသာ နှုတ်ဆက် ထွက်သွားချင်သူ.. ကျမသာ ဦးဆုံး ထွက်သွားချင်သူ.. ကျမသာ ဦးဆုံး နှုတ်ဆက်ချင်သူ..
ဒါကြောင့် `ကို´ ကလည်း ကျမ လိုက်မပို့တာကို နားလည် စာနာနိုင်ခဲ့တာပေါ့…။
`ကို´ ကလည်း ကျမကို ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့.. သူခေါ်ရင် သူ့နောက်ကို လိုက်ဖို့ အဆင်သင့် လုပ်ထားဖို့ .. မှာတမ်းချွေနေလေရဲ့…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမအနေနဲ့ `ကို့´ နောက်ကို ဘယ်တော့မှ လိုက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိနေလေတော့….
`ကို့´ ကိုလည်း ကျမ မလိုက်ဖြစ်မဲ့ အကြောင်း ပြောမထွက်ရက်ဘူးလေ..။
`ကို´ ပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်း ကျမ နားထောင်နိုင်စွမ်း မရှိတာကို ခွင့်လွှတ် နားလည်စေချင်တာ ကလွဲလို့…
သေချာတာကတော့ တံတိုင်းကြီးရဲ့ နောက်ကွယ်က မာယာထောင်ချောက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမဲ့ နေရာတွေထဲမှာ ကူးခပ်ဖို့ စိတ်အင်အား ရှိမှာ မဟုတ်လို့ပါ `ကို…´။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:34 PM 23 comments:
ကျမတို့ရုံးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်က ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ကြောင်နှစ်ကောင် ရောက်လာပါတယ်.။ ကြည့်လိုက်တော့ ကြောင်တွေက ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ ပုံလေးတွေနဲ့..။ ဒါနဲ့ ကျမက ညနေ တညနေမှာ ကြောင်လေးတွေ စားဖို့ ထမင်းလေးနယ်ပြီး ကျွေးမလို့ လုပ်တော့ ကျမကိုလည်း မြင်ရော အပြင်းအထန် ထွက်ပြေးလိုက်တာ တကောင်က သစ်ပင်ပေါ် အတင်းတက်ပြေးတာ အလယ်လောက်ရောက်တော့ ပြုတ်ကျပါရော… ပြုတ်ကျတာတောင် ထပ်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်ရအောင် တက်ပြေးပြီး ဟိုဘက်ခြံထဲ ပြေးသွားတယ်… နောက်တကောက်ကတော့ ခြံအုတ်တံတိုင်းပေါ် တက်ပြေးလိုက်တာ… ဟိုဘက်ခြံထဲပဲ ရောက်သွားရော.. ကျမမှာသာ အငေးသားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ထွက်ပြေးတာလဲ မသိဘူးဆိုပြီး တကိုယ်တည်း မေးခွန်းထုတ်နေမိတာပေါ့..။
သူတို့ ဆာမှာစိုးလို့ ကျွေးချင်လို့ လာကျွေးတာကို ကျမကိုမြင်တာနဲ့ ထွက်ပြေးလိုက်တာ အလုအယက်ပါလား……..။
ဒါနဲ့ပဲ ကျမတယောက် ကြောင်ကြောက်ကြီး ဖြစ်သွားပါတော့တယ်..။ ရုံးက လူတွေက နင် ကြောင်ကို သွားမကျွေးနဲ့တော့.. ကြောင်တွေလည်း မမြင်စေနဲ့တော့တဲ့.. ကိုင်း…. မခက်ပေဘူးလား…..
ရုံးမှာ ရှိတဲ့ မိန်းခလေး နှစ်ယောက်လုံးကို ကြောင်ကလည်း အကြောက်ကြီး ကြောက်နေလေတော့ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကလည်း ခပ်ဝေးဝေးပဲ နေဖြစ်ပါတယ်..။ ဟုတ်တယ်… ကြောင်တွေကလည်း ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကို မမြင်လိုက်နဲ့.. မြင်တာနဲ့ ထွက်ပြေးတော့တာပဲ..။ သိပ်မကြာပါဘူး… အဲဒီကြောင်နှစ်ကောင်လုံး ပျောက်သွားလိုက်တာ ပြန်မလာတော့ဘူး..။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ပဲ ပြန်မလာတော့သလိုလို ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့……..။ ဘယ်ကမှန်း မသိရောက်လာပြီး ဘယ်ကိုပြန်သွားမှန်းလည်း မသိရပါလား…။
အော်… လွန်ခဲ့တဲ့ လကတော့ အဲဒီ် ကြောင်နှစ်ကောင် ပြန်ရောက်လာပြီး ကြောင်လေးတွေ လေးကောင် ပေါက်ပါရော…။ ရုံးက ပြောပြန်ရော.. ကျမတို့ကို သွားမကြည့်နဲ့တဲ့.. နောက်ထပ် ထွက်ပြေး သွားအုံးမယ်တဲ့လေ… (အဲလို နာမည်ရတာ…….).
ကြောင်လေးတွေ ကလည်း သူ့မိခင် ကြောင်မလေး လိုပဲ ကြောက်တတ် လိုက်တာ..။ ကျမတို့မှာ ကြောင်လေးတွေကို ကြည့်ချင်လို့ သွားချောင်းလိုက်.. ကြောင်လေးတွေက ထွက်ပြေးသွားလိုက်နဲ့ တခါတလေ စိန်ပြေးတမ်း ကစားနေသလိုတောင် ဖြစ်ရတယ်.။
ဟိုတနေ့ ညနေကလည်း ကြောင်လေးတွေ အားလုံး ၀ရန်တာပေါ်မှာ ရှိနေတာနဲ့ နီးနီးလေးတော့ သွားမကြည့်ရဲဘူးပေါ့..။ အောက်ကနေ ချောင်းတာ ကြောင်လေးတွေကလည်း သူ့အမေအပေါ်ကနေ ပြန်ချောင်းလိုက် ကျမက ဟိုဘက်ပုန်းနေလိုက် ကြောင်လေးကလည်း တိုင်ဘေးနား သွားပြီး ပြန်ချောင်းလိုက်နဲ့…။ ကျမနဲ့ ကြောင်လေးတွေနဲ့ ချောင်းတိုင်း ဆော့သလိုတောင် ဖြစ်နေကြတယ်..။ ကြောင်လေးတွေကလည်း ကျမကို အကဲခတ်ပေါ့… ဘာများလုပ်မလဲဆိုပြီး..။
မနေ့ညနေကတော့ ကျမပြန်ခါနီး ကြောင်လေးတွေကို တခါ သွားချောင်းသေးတယ်…။ ကျမကိုလည်း မြင်ရော ကြောင်ပေါက်လေး လေးကောင်လုံး စတိုခန်းထဲ ပြန်ပြေးလိုက်ကြတာ.။ ကျမလည်း ဘီစကွတ် ယူလာပြီး ချေပြီးတော့မှ သူတို့စားတဲ့ ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပေးထားလိုက်တယ်.. ပြီှးတော့ ပြန်လာပြီး ကွယ်ရာကနေ ချောင်းတာပေါ့..။ သူတို့တွေ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ထွက်လာကြတယ်.. ပြီးတော့ ပန်းကန်ထဲက ဘီစကွတ်တွေ တကြွတ်ကြွတ်နဲ့ ၀ါးနေလိုက်တာ….. အဲဒီတော့မှ သူတို့ ဘီစကွတ်စားသားပဲ… ဆိုပြီး နောက်ထပ် ကျွေးဖို့ ထပ်ယူလာတော့ ပြန်ပြီးထွက်ပြေး သွားတယ်..။ ဒါနဲ့ပဲ ပန်းကန်ထဲ ထည့်ထား ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ ကြောင်လေးတွေကို ပြန်ချောင်းတာပေါ့… ကျမလည်း သူတို့ စားနေတာကို ပီတိဖြစ်ပြီး ချောင်းနေလိုက်တာ..
အဲ.. တော်တော်ကြာတော့မှ ကျမ ခြံရဲ့ အုတ်တံတိုင်းပေါ် ကြည့်မိလိုက်တာ…
အလို…. ကြောင်လေးတွေရဲ့ အမေက ကျမကို သေချာကြည့်နေတာကိုး…။ ကြောင်လေးတွေကို ကြည့်လိုက် ကျမကို ကြည့်နေလိုက်နဲ့.. သူလည်း လာမစားဘူးလေ…။ ကြောင်လေးတွေကို ဘာများလုပ်မလဲလို့ ကျမရဲ့ အရိပ်အခြေ ကိုစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ်..။ ကျမသာ သူ့ကလေးတွေကို တခုခု လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာများပြန်လုပ်မလဲ မသိဘူးနော်..။ ကျမမှာလည်း ရဲရဲတင်းတင်း မကျွေးရတော့ ခုလိုပဲ ချောင်းမြောင်းပြီး ကျွေးရပေအုံးမယ်..။ ကျမရဲ့ ကြောင်ချောင်းရတဲ့ အဖြစ်လည်း တဒုက္ခပါလားလို့သာ ညည်းချင်း ထုတ်ပြီး ထပ်ပြီး ချောင်းပေရအုံးမှာပေါ့...။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:25 PM 24 comments:
အိပ်မက်တွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ လှမ်းလျှောက် လာခဲ့တဲ့ ခရီးလမ်းမှာ အနာဂတ် ဆိုတာ မရေရာ မသေချာ ခဲ့ဘူး..။
သေချာတာကတော့ ၀မ်းနည်းမှု၊ စိတ်အားငယ်မှု၊ သတိရမှု၊ ခွဲခွါခဲ့ရမှု၊ ဝေးကွာမှု၊ ဆိုတဲ့ ဒဏ်ရာ တွေနဲ့သာ ပြည့်နှက်လို့… ရှေ့မှာ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အရာ မှန်သမျှကို ဘယ်လို သတ္တိ ခွန်အားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ဖြည့်စွမ်းရမလဲ ဆိုတာသာ အထပ်ထပ် ပေါ်နေခဲ့တော့တယ်…။
ခရီးလမ်းကြမ်းမယ် ဆိုတာ သိပေမဲ့ အမှန်တရား အစိုင်အခဲက ရင်ထဲ၊ နှလုံးသားထဲမှာ ထုဆစ်ပြီးသားမို့ လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းကြမ်း၊ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲပါစေ အားတင်းပြီး လျှောက်ဖို့သာ ဇောကပ်နေမိတယ်…။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေက ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးနေခဲ့ပေမဲ့ ရှေ့မှာ မြင်ရမဲ့ လမ်းက ချောမွေ့ချင်မှ ချောမွေ့မှာ သိပေမဲ့ ဒီလမ်းကိုမှ ရွေးပြီးလျှောက်ခဲ့တာကိုတော့ သိနားလည်ချင်မှ နားလည်ကြမှာပါ….။
အဲဒီ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒတွေ အောင်မြင်ဖို့၊ အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားရတော့မယ်.. စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရတော့မယ်.. အရာရာ သည်းခံရတော့မယ်… ဆိုတာ တွေကလည်း ရစ်ပတ်ချည်နှောင်လို့….။
အတ္တမပါတဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ လျှောက်နေတဲ့ လမ်းမှာ အဖုအထစ်တွေ များမယ်… ဆိုတာလည်း မသိမဟုတ်…… ။
မရေရာမှုတွေကို တတ်နိုင်သလောက် မောင်းထုတ်ရင်း သေချာတဲ့ အမှန်တရား ကိုအထပ်ထပ် ထုပ်ပိုးလို့ လျှောက်နေခဲ့ပေါ့…။
နင် ပြန်မလာတော့ဘူးလား တဲ့………….
ဘယ်ဘက်ရင်အုံထဲက တင်းကျပ်မှုတခုက နာနာကျင်ကျင် ဆွဲဆောင့်လိုက်ရင်း စည်းချက် မမှန်တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကြောင့်….ငါ…….. ဘာပြန်ပြောရမလဲ …….။
အဖြေတခု အနေနဲ့ `ငါ….. နာနာကျင်ကျင်... ဟားတိုက် ရယ်မောပစ်ခဲ့တယ်´……….
ဆန္ဒ ရှိနေတဲ့ အရာတွေ၊ ဖြစ်ချင်နေတဲ့ အရာတွေ၊ စိတ်ရှိတိုင်း လုပ်ခွင့်ရဖို့ .… စိတ်ခွန်အား အပြည့်နဲ့ ကြိုးစားတည်ဆောက်ပေါ့….။
ငါ့..ရဲ့ ဆန္ဒ တစုံတရာကို `..........တို့´ ကို သိခွင့်ပေးဖို့၊ သိနားလည်ပေးဖို့လည်း အခြေအနေ မပေးခဲ့လေတော့…
ခုချိန်မှာ `ငါ…တို့တွေ…´ မသိခဲ့တဲ့၊ မသိသေးတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဘ၀တွေ အသေင်္ချေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောချင်နေမိတာ ရင်နဲ့အပြည့်ပေါ့…။
အဲဒါတွေပြောဖို့ဆို တထောင့်တည ပုံပြင်တောင် မှီနိုင်မယ် မထင်တော့ဘူး….။ `ငါ…´ လေ `………တွေ´ ကို ခါးသီး နာကျင်စရာတွေ ရှိတဲ့ ဘ၀တွေကို မတွေ့နိုင်၊ မသိနိုင်ကြတာကိုတော့ သိလာအောင်၊ နားလည်လာအောင် ပြောချင်နေမိတယ်… ဒါမှလည်း `ငါ..´ ဆိုတဲ့ `ငါ…´ လည်း တစုံတခု အတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ သူတယောက် ဖြစ်မှာ….။ `ငါ…´ တာဝန်ကျေတဲ့ သူတယောက်တော့ ဖြစ်ချင်တယ်….။
ဒီလိုမျိုး ဘ၀တွေကို သိနားလည်ခဲ့ရင်၊ စာနာနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မတ်နိုင်သမျှလည်း မတ်အောင် လုပ်နေရင်း ဘေးနားဝန်းကျင်က လဲကျနေတဲ့ သူတွေကိုလည်း မတ်နိုင်အောင် ထူပေးသင့်သလောက် ထူပေးနိုင်ဖို့ ခွန်အား သတ္တိတွေ၊ နားလည်မှုတွေ မွေးမြူလာနိုင်လိမ့်မယ်…။
`……….တို့´ တွေ ပြောသလို အရင်ဆုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မတ်နိုင်မှ ဖြစ်မှာဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ….. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မတ်မတ်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားရင်း ၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဘ၀လေးတွေကိုလည်း မတ်မတ် ဖြစ်နေအောင်၊ မတ်မတ်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးရလိမ့်မယ်…။
ဟုတ်တယ်လေ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မတ်မတ်မနေနိုင်ရင် တခြားဘ၀လေး တွေကိုလည်း ဘယ်မှာ မတ်လို့ရအောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလဲ…..။ ကိုယ်တယောက်တည်း မတ်နေအောင်ပဲ အရင်ကြိုးစား လိုက်အုံးမယ် ဆိုရင်လည်း ဘယ်အချိန်မှာမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မတ်နေနိုင်ပြီလို့ သိကြလိမ့်မလဲ… အတောသတ်နိုင်ပါ့မလဲ..။
`………..တို့´ က `ငါ့..´ကို ကောက်ချက်ချတာက သွေးအေးလိုက်တာတဲ့..….။ စိတ်ဓါတ်က မာကျောလိုက်တာတဲ့…။ `..............ငါတို့အားလုံး´ ဘ၀တွေထဲမှာလည်း အထူးဆန်းဆုံးပဲတဲ့……..။
`ငါ့… မှာ `............တို့တွေ´ သိနားလည်လာအောင် လောလောဆယ် ပြန်ပြောဖို့ အကောင်းဆုံး စကားလုံးတွေ ရှာဖွေနေမိတယ်..။
`ငါ..´ ပြောချင်တာက `ငါ..´ အားမာန်အပြည့်၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ယုံကြည်ရာလမ်းကို သစ္စာရှိရှိ၊ သမာဓိရှိရှိနဲ့ ရဲရဲလျှောက်လှမ်း နေပါတယ် ဆိုရင် `……….တို့´တွေ `ငါ့………´ ကို ဘာပြန်ပြောမလဲလို့......။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:14 PM 8 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:42 AM 15 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:25 PM 25 comments: